मुलुकका लागि काँग्रेस आमा हो, काँग्रेस बलियो नभए ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ : नवीन्द्रराज जोशी – Everest Times News
मुलुकका लागि काँग्रेस आमा हो, काँग्रेस बलियो नभए ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्नेछ : नवीन्द्रराज जोशी
२०७६ मंसिर ३, मंगलवार २१:२६
नेपाली काँग्रेसका प्रभावशाली नेता नवीन्द्रराज जोशी पार्टी भित्र एक असल विचारकका रुपमा चिनिन्छन् । पार्टीलाई गतिशिल बनाउनु पर्छ, पार्टीको विचार युवाहरुमा पुर्‍याउनुपर्छ र राजनीतिमा युवाहरुलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्ने नेता हुन जोशी ।
काठमाडौंका मतदाताको मन जित्न सफल नेता जोशी २८ वर्षको उमेरमै नगरपालिका मेयरको चुनाव जितेका थिए । नेपाली काँग्रेसका आदर्श नेता लौह पुरुष वीर गणेशमानको जीवनमा आधारित चलचित्र निमार्ण गरेका जोशी त्यही चलचित्र प्रदर्शनका क्रममा अमेरिका आइपुगे । यसै अवसरमा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा पूर्व मन्त्री जोशीसँग पत्रकार अनिल अधिकारीले गरेको कुराकानीः
बहुमतको सरकारले काँग्रेसकालाई त कत्ति पनि टेरेन हगि ?
बहुदलीय शासन व्यवस्था ल्याउनका लागि लडेका मान्छे हामी, नेपाली काँग्रेसको स्थापना लोकतन्त्र र बहुदलीय शासन व्यवस्थाका निम्ति भएको हो । नेपाली काँग्रेसले ठुलो लडाई लडेर प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई मास्ने र एकदलिय शासन व्यवस्था लाद्ने ढंगबाट नेपाल सरकार र नेकपा अगाडि बढेको छ । यसलाई पुष्टि गर्न मैले केही विरोधका शब्द भन्नै पर्दैन्, प्रेसलाई अंकुश लगाउने ढंगबाट विधेयक आईरहेका छन्, प्रश्न सोधका भरमा पत्रकारलाई जागिरबाट निकालिएको छ । पूववर्ती सरकारले गरेको निर्णय उल्याउँदै मनपरी ढंगबाट सरकारले नयाँ निर्णय र नियुक्ती गरिरहेको छ । समग्रमा सरकार जनताप्रति उदासिन छ, लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रश्न चिन्ह खडा भईरहेका छन् । बहुदलीय शासन व्यवस्थामा प्रतिपक्षी दलको आफ्नै भुमिका हुन्छ । सरकार प्रतिपक्षी दलसंग सल्लाह गर्दै गर्दैन । यसर्थ बहुदलीय शासन व्यवस्थाको पक्षधर नेपाली काँग्रेस अझै जिम्मेवार भएर मुलुक र नेपाली जनताका खातिर दह्रो भएर उभिनुपर्ने बेला आएको छ । अन्यथा मुलुक फेरी अर्को समस्यामा फस्न सक्छ । हामीले धरै बिवेक पूर्ण ढंगबाट निर्णय गर्दै मुलुकलाई यहाँ सम्म ल्याएका हौं । सरकार र नेकपाको गतल क्रियाकलापका बिरुद्ध खबरदारीका लागि काँग्रेस सँधै सचेत छ ।
प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा पनि सशक्क्त छैन नि काँग्रेस ?
हामीले जुन ढंगबाट आफ्ना कार्यक्रम गर्नुपर्ने हो त्यो शसक्क्त नभएको कुरा पार्टीले पनि महशुस गरेको छ । नेतृत्व तहमा पनि यस बिषयमा बहसहरु नभएका होइनन् । तर काँग्रेसले बिरोधका नाममा बिरोध गरेर आफुलाई क्रान्तिकारी देखाउन भन्दा पनि एउटा जिम्मेवार दलको हैसियतमा भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ । हामीले सिमानाका बिषयमा सरकारसँग हातेमालो गरेर अगाडि बढीरहेका छौं । यदी कम्यूनिस्ट साथीहरु प्रतिपक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने उहाँहरुले सडकमा टायर बालेर विरोध गर्नु हुन्थ्यो हामीले यो बिषय गम्भीर भएकाले रचनात्मक तर बलियो ढंगबाट कुरा राखेर आफ्नो मुलुकको सिमानाको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हिसावले लागिरहेका छौं । हो बिगतमा केही गल्तीहरु भए होलान तर समग्रमा नेपाली काँग्रेस बिना मुलुकको हित हुँदै हुँदैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा चलेको मुलुकका लागि लोकतान्त्रिक शक्ति अर्थात नेपाली काँग्रेस बलियो हुनु जरुरी छ अन्यथा तपाई हामीले ठुलो मुल्य चुकाउनुपर्ने हुन्छ । मुलुकका लागि नेपाली काँग्रेस आमा हो । आमा बिनाको घर, कसरी घर रहन सक्छ ? हामी सबै विषयलाई गम्भीरता पूर्वक लिएका छौं, अब काँग्रेस लोकतन्त्र र मुलुकको रक्षाका लागि सडक र सदनमा खबरदारी गर्दै अगाडि बढ्छ ।
काँग्रेसमै आन्तरिक गुट धेरै भयो भन्ने कार्यकर्ताको आरोप छ ?
हरेक राजनीतिक दलमा समूह समूहमा राजनीति हुन्छ नै, काँग्रेस पनि त्यसबाट अछुतो छ म भन्दिन । तर नेपाली काँग्रेस लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई आत्मसात गर्ने पार्टी हो । हेर्नुस हामीले हरेक तह र तप्कामा लोकतान्त्रिक बिधिबाटै नेता र नेतृत्व छानेका छौं । हिजो भएका गल्तीहरु अबको महाधिवेशन तथा अन्य स्थानिय चुनावहरुबाट सुधार हुँदै जानेछन् । नेतृत्व छानेको हामी कार्यकर्ताले नै हो, अबको राजनीतिलाई अगाडी बढाउन कस्तो नेता र नेतृत्व छान्नुपर्छ भन्ने कार्यकर्ताकै हातमा छ, यसर्थ यसलाई गुट उपगुट भन्दा पनि पार्टीको हित हुनेगरी नेता कार्यकर्ता सचेत भएर लाग्नुपर्ने बेला आएको छ । पार्टी केही कम्जोर अवस्थामा भएकाले यसलाई बलियो बनाउने भनेकै कार्यकर्ताले हो । हाम्रा साथीहरु यस बारेमा सचेत हुनुहुन्छ ।
युवा नेताहरुलाई तपाईहरुले नेतृत्व तहमा आउन नै दिनुहुन्न !
काँग्रेसमा हरेक नेताहरु युवा विचार भएका हुनुहुन्छ । लोकतन्त्र भनेकै युवा बिचार हो । जहाँ व्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ, त्यही विचार नै युवा विचार हो । भावनामा बहकिएर निर्णय गर्दा कहिले काँही गल्तीपनि हुन सक्छ । यसर्थ सबैलाई समेट्दै संगठनमा क्रियाशिल जनताको भावना बुझ्ने नेता छान्नुपर्ने हुन्छ । हामीले धरै युवा साथीहरुलाई समेट्दै अगाडि बढी रहेका छौं । तपाईले प्रश्न गर्दा नाम लिनुभएका गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा जस्ता नेताहरु पार्टीको प्रन्ट लाइनमै हुनुहुन्छ । यस्तै हाम्रो हरेक संगठनमा त्यस्तै उदाहरणीय नेता साथीहरु हुनुहुन्छ । चाहे तपाईले महिला संघ भन्नुस या नेपाल विद्यार्थी संघ, या दलित संघ, सबै भ्रातृसंगठनबाट नेता छान्ने अन्तिम ठाँउ महाधिवेशन हो । यसर्थ अब पार्टीलाई नयाँ विचारबाट अगाडि बढाउन पार्टीको महाधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ । त्यही महाधिवेशनले बाँकी कुरा टुंगो लगाउँछ ।
नेतृत्वको खुबै आलोचना छ, बोल्नै नहुनेमा बोल्ने र बोल्न पर्ने ठाँउमा नबोल्ने यस्तो किन ?
मैले माथि पनि भनेको छु हामीले हरेक विषयलाई रचनात्मक र सही ढंगबाट विरोध र सर्मथन गर्दै आईरहेका छौं । यहाँले प्रश्नमा भन्नु भएको या इंगित गर्न खोज्नु भएको आलमको बिषयमा चाँही हामीले भन्दै आएका छौं, कुनै पनि बिषयलाई व्यक्तिगत रुपमा होइन बिधि र कानुनलाई आधार बनाउँछौं । यदि कसैले कानुन उल्लंघन गर्छ भने त्यो व्यक्ति कानुनले भने अनुसार सजाय भोग्न तयार हुनुपर्छ । कानुन भन्दा माथी कोही छैन्, कानुन र विधिविधान अनुसार नै सबैले सजाय भोग्नुपर्छ । दोषी कोही उम्कनु हुन्न, निदोष फस्नु हुन्न । नेतृत्वले यस्ता विषयलाई केही सचेत भएर प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्नेमा म सहमत छु ।
पार्टीको महाधिवेशनबाट नेतृत्व लिने गरी कसरी प्रस्तुत हुने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ?
केही कुरा मैले उल्लेख गरिसकेको छु । म मुलुकको समृद्धि, विकास र लोकतन्त्रका लागि जुनसुकै भुमिकामा रहन पनि तयार छु । हिजो मेरो मन्त्री कार्यकालमा धेरै उद्योगधन्दा पुन संचालनमा ल्याउन पहल गरेको थिएँ, त्यो बारेमा दुनिया जानकार छ । अनि पार्टीलाई जीवन्त राख्नका लागि मैले देशभर प्रशिक्षण र अन्य कार्यक्रमहरु लिएर हिडँेको छु । कार्यकर्ताको भावना बुझेको छु । यसर्थ आगामी महाधिवेशनबाट साथीहरुले नेतृत्व तहमा रहने गरी तयार हुनुहोस भन्ने सुझाव दिनु भएको छ । म पार्टीको नेतृत्व तहमै छु र आगामी महाधिवेशनबाट पनि नेतृत्व तहमै रहने गरी तयारी गरिरहेको छु । स्थान कुन हुने भन्ने अहिलै भन्न मिल्दैन । पार्टीले र कार्यकर्ताले समय अनुकुल निर्णय गर्ने कुरा हो ।
तपाईहरुको भातृसंगठन जनसम्पर्क समिति अमेरिकामा धेरै नै विवादमा छ, यसलाई मिलाउन केही पहल गर्नुभयो ?
लोकतान्त्रिक पार्टीमा नै हो बिरोध र बहस हुने । हाम्रा साथीहरु विधि विधान भन्दा बाहिर जान सक्नु हुन्न् । वहाँहरु काँग्रेस हो । काँग्रेस पार्टीले मिलाउनुपर्ने धेरै ठाँउहरु छन्, बिद्यार्थी संघ भन्नुस या जनसम्पर्क समिति । हो पार्टीको स्पष्ट निर्देशन नहुँदा बिदेशमा रहेको जनसम्पर्क समितिले स्पष्ट भएर काम गर्न पाएको थिएन् । तर यहाँ रहेका साथीहरु असल नेताहरु हुनुहुन्छ । सबै साथीहरुलाई मिलाउने र छलफल गर्ने हिसावले मैले कुराकानी गरेको छु । साथीहरुले मसँग विवाद भएका विषय र सम्वाद हुनुपर्ने बिषयहरु पनि राख्नु भएको छ, नेपाल हिड्नुको अघिल्लो रात पनि म साथीहरुसंग छलफलमै थिएँ । पार्टीले अहिले स्पष्ट निर्देशनका साथ अधिवेशन गर्नका लागि पत्र पठाईसकेको अवस्था छ । यसर्थ सबै साथीहरु मिलेर समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्नुहुन्छ भन्नेमा म विश्वस्त छु । यसका लागि पार्टीका जिम्मेवार साथीहरु जिम्मेवार ढंगबाट लाग्नु हुनेछ । म यहाँहरुसंग सबै सहकार्य गर्न तयार रहेको र जनसम्पर्कको हितका लागि सल्लाह सुझावका साथ सँधै सम्पर्कमा रहनेछु ।
(एभरेस्ट टाइम्सको वर्ष १२, अंक २ मा प्रकाशित सामाग्री)